Ahoana ny fametrahana rindrambaiko APK amin'ny Android sy zavatra hafa ;-) - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ahoana ny fametrahana rindrambaiko APK amin'ny Android
Manararaotra ny manamboatra finday Ataoko ny manazava sy mandrakitra hetsika maro izay angatahan'ny namana sy ny fianakaviako matetika hataoko. Amin'ity tranga ity dia manazava aho ny fomba fametrahana rindrambaiko APK amin'ny Android.
Tonga dia mankany amin'ny teboka aho, raha te hahafantatra ny atao hoe APK ianao ary rehefa mety mila mametraka iray ianao dia mankanesa any amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Raha ny amiko Halefako indray ny Play Store izay mandeha tsara amin'ny finday izay hampiasainay nefa tsy misy SIM alehanan'ny rafozako. Tsy afaka mamoha azy aho, na dia tsy mamerina ny ozinina intsony ary haingana kokoa amiko ny mametraka mivantana ilay rindranasa noho ny mahita izay mitranga amin'ny finday avo lenta na mampirehitra azy.
Ahoana ny fametrahana APK
Mandeha amin'ny Settings> Security izahay ary ho hitantsika fa misy safidy milaza ny fiaviany tsy fantatra. Tokony hampavitrika azy isika.
Hanana fanamarihana izahay ary hangataka fanamafisana. Manome MANAIKY izahay. Ary hitantsika fa ampandehanana ireo fiaviana tsy fantatra.
Ny dingana manaraka raha mbola tsy vitantsika izany dia ny fampidinana ny APK amin'ny tranokala atokisana. Manome loharano vitsivitsy izahay eto ambany.
Raha vao sintonina, ny fipihana eo amin'ny apk dia hanomboka ny fametrahana
Tato ho ato dia manao zavatra marobe amin'ny finday avo lenta aho. Jereo ity amboary raha sendra vaky ny efijery misy anao.
Aiza no ahazoana APKs
Ny olana amin'ny fametrahana APK anao samirery nefa tsy ao amin'ny Play Store izy ireo dia ny fampitomboana betsaka ny fahafaha-mitondra code maloto, hangalarana angona, fampahalalana, viriosy maharitra mandrakizay amin'ny finday avo lenta, sns.
Marina fa ao amin'ny Play Sotre dia misy ihany koa ny tranga fampiharana maloto, saingy sarotra kokoa izany, betsaka kokoa ny sivana azo ampitaina.
El tsiambaratelo fiarovana miaraka amin'ny APKs dia ny misintona azy ireo amin'ny loharano azo antoka. Ny tanjon'ity dia ny tsy fahazoana rindrambaiko aloa maimaim-poana. Mihoatra noho izany raha hitanao fa manolotra azy ireo ianao dia miahiahy satria mety misy malware izany.
Ny tranonkala sasany izay atokisana hatreto dia:
Raha mahalala bebe kokoa ianao dia afaka mamela hevitra.
Tandremo hatrany izay ampidininao sy apetrakao ary avy aiza. Na dia ny Play Store aza
Mametraka APK aho dia manjavona
Mety ho noho isika nampihetsika ny Play Protect, izay safidin'ny Play Store izay, ankoatry ny fanamarinana ireo rindranasa Play Store, dia mitady eo amin'ireo rindranasan'ilay fitaovantsika mitady virus na zavatra mampiahiahy ary raha mahita tsy fantatra APK na ilay ahiahianao fa afaka mamafa azy amin'ny findainay na ny takelaka.
Para alefaso ny Play Protect Mila mandeha any amin'ny Play Store ianao ary amin'ny menio safidy Play Protect.
Raha vantany vao ao anaty dia tsindrio ny kodiarana famerenana ary alao ny fampiharana Fandinihana miaraka amin'ny Play Protecty izao
Fa inona ny APK
Ny rakitra APK (Android Application Package) dia rakitra azo ampiharina amin'ny Android, toy ny rakitra exe ho an'ny Windows. Izy io dia toy ny fonosana voafintina izay misy ny angona rehetra ilaina hapetraka tsara ao amin'ny rafitra fiasa.
Ahoana raha omenao XAPK aho, ahoana no hametrahako azy?
Mety ho XAPK no hitanao. Araka ny efa nolazainay, ny APK dia rakitra voahidy izay misy ny zava-drehetra ilaina amin'ny fametrahana ny rindranasa, fa indraindray kosa misy zavatra hafa takiana, angona fanampiny izay mety tsy afaka ampidinintsika avy amin'ny fitaovantsika ary fonosina ao ity XAPK izay matetika misy APK sy OBB miaraka amin'ny angona ilaina hamenoana ny fampiharana.
Raha te-hametraka XAPK dia mila fampiharana installer ianao, ohatra APKPure
Maninona no mametraka APK
Efa niresaka antony vitsivitsy isika. Vonona azy ireo ho anao aho:
Mampiasà kinova fampiharana taloha, na iray manokana.
Mampiasa fampiharana izay tsy ao amin'ny Play Sotre
Miezaha manamboatra smartphone
Mbola misy maro hafa koa. Samy manana ny filàny avy ny tsirairay ary amin'ny toe-javatra sasany. Ka tsy heveriko fa NAHOANA no zava-dehibe.
Ahoana ny fitrandrahana rakitra APK napetraka ao amin'ny fitaovantsika
Ny tadiavintsika eto dia ny manao ny mifanohitra amin'izay. Makà apk fampiharana izay efa napetrakao. Tianay ny rindranasa iray ary te hanana kopia nomaniny ho solon'izay izahay, na satria fantatray fa ao amin'ity kinova ity dia miasa marimaritra iraisana izy io ary tsy fantatray raha hanohy hiasa izy ireo, na satria hitantsika fa handeha ho fanovana izay tsy tiantsika, na ny antony hahatongavana.
Misy fampiharana samihafa momba an'io. tsotra ampiasaina ary tsy ilaina ny faka na inona na inona
Ataovy ao an-tsaina fa mazàna ireo rindranasa ireo dia misintona ireo rindranasa fa tsy ny kaonty, ny fikirana na ny angona anananao ao aminy.
Amin'izany rehetra izany dia manana fampahalalana ampy isika hahafantarana ny momba ny APK sy ny azontsika atao amin'izy ireo.
1 Ahoana ny fametrahana APK
2 Aiza no ahazoana APKs
3 Mametraka APK aho dia manjavona
4 Fa inona ny APK
5 Ahoana raha omenao XAPK aho, ahoana no hametrahako azy?
6 Maninona no mametraka APK
7 Ahoana ny fitrandrahana rakitra APK napetraka ao amin'ny fitaovantsika